Ny Tantarantsika - SLAIR
Ny orinasa taloha dia ny orinasa mpamokatra pneumatic Ningbo Xinxing. Niorina tao amin'ny 1992 izy ary nanampy manokana ny famokarana fitaovam-panafody isan-karazany. Ary mpamatsy tsara ho an'ny orinasa malaza Japon ANEST IWATA.
Taorian'ny folo taona voalohany nanatrehana ny ezaka tsy misy fiatoana, dia nahavita fiaraha-miasa akaiky ny 2001 Xinxing pneumatic sy Taiwaney matihanina fiompiana matihanina, nanova anarana ny anaran'ny Ningbo Xinxing Pneumatic Goods Co., Ltd.
In 2002, ny fitaovan'ny pneumatic voalohany XQ XUMUMX Air dia nivoaka tao amin'ny firenena mba hahalalan'izy ireo ny fiderana lalina avy amin'ny mpivarotra, ny fivarotana ary ny orinasa fanamboarana. Ny volana Jona, ny orinasa amin'ny alalan'ny fanamarinana ny rafitra fanaraha-mena ISO301.
In 2003, fotoana voalohany hanatrehana ny fararano Canton fair ary fitaovana an'habakabaka amidy manerana izao tontolo izao tahaka ny USA, Japon, Azia atsinanana ary firenena hafa.
In 2004, Xinxing dia nanatrika ny Cologne International Hardware, ary ny fitaovan'ny rivotra rehetra dia nahazo mari-pahaizana Eoropeana CE sy CE.
In 2005, Xinxing nanatrika ny AAPEX Show ary nanomboka nifandray tamin'ireo mpanjifany matihanina matihanina mifantoka amin'ny kalitaony, ary manangona ny foto-kevitra avy amin'izy ireo.
In 2006, nanomboka nanararaotra ivon-toerana maromaro ny orinasa, CNC ambony sy ny sisa.
In 2008, amin'ny trangam-piainana ara-toekarena manerantany, ny orinasa manana kalitao matihanina, ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny pneumatic dia tonga any an-dalamby, nandresy ny mpanjifa avy any Etazonia, Japon, firenena eoropeanina sy firenena hafa, dia nanomboka ny fanovana ara-dalàna ny famokarana matihanina pneumatic tools.
In 2009, fitaovana sy fitantanana mba hanatsarana ny fampitoviana, ny orinasa dia mampitombo ny herin'ny ankapobeny.
In 2010, Ny orinasa matihanina matihanina ao Etazonia dia te-hiara-hiasa amin'ny famolavolana fitaovam-pitaovana vaovao, nahazo ny fahafaham-piderana.
In 2011, Xinxing dia manamboatra fitaovana matihanina manerantany ho an'ireo matihanina manomboka amin'ny tsena. Tamin'io taona io ihany dia namorona marika "SLAIR".
In 2013, ny orinasa hanomezana fahafaham-po ny fampandrosoana matihanina, ny orinasa dia namorona fampiasam-bola vaovao amin'ny atrikasa famokarana matihanina.
2014 - 2015, nampidirina fitaovam-pampitam-baovaon'izao tontolo izao, ary nanomboka nampiasa ny fomba fiasa robot mba tsy hampiasa asa.
In 2016, mba hanatsarana ny kalitaon'ny stable, ny orinasa dia nampiditra fitaovana fanadiovana teknolojika Amerikana mba hahazoana antoka fa ny ampahany amin'ny ampahany, ny madio anatiny, ary ny antoka ny fahalavorariana amin'ny ampahany, ny fampiharana ny fitaovana azo antoka kokoa.
In 2017, ny orinasa dia manana drafitra hananganana atrikasa fanatanjahan-tena, mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa marobe. Ary aoka ireo olona mampiasa fitaovana fiaramanidina hahafantatra fa ny fitaovana tsara indrindra, SLAIR MADE.